May 31, 2020 2447
साथीको लहै लहैमा लागेर मेरो छोराले ज्या’न गुमायो । नवरा’ज विकको लागि आफ्नो छोराले ज्यान गुमाए पनि उनीहरुका बारेमा कसैले नबोलेको भन्दै एक आमाले बि’लौना गरेकी छन् । नवराज सहित उनका छोरा गणेश वुढामगरको श’व पनि फेला परेपछि किरि’या बसेकी आमाको बिलौना हो यो ।
पदम बहादुर बुढामगर २ छोरा थिए । यिनी छोरालाई पढाउनका लागि उनी भाडामा बस्न जाजर’कोट आएका थिए । छोराको भविष्यका लागि भन्दै आफ्नो जन्मघर छोडे’र जाजरकोट आएका उनी एउटा छोरा गु’माए ।
गणेशवहादुर बुढामगरको नि’धन पछि उनी किरिया बस्ने घर पनि पाएनन् । बस्दै आएको घरवाट घरभेटीले निकालिदिएपछि उनी छोराको किरिया गर्न नजिकै रहेको खा’नेपानी भवनमा पुगेका छन् । दुई छोरा मात्र थिए ।
उनीहरुकै भविष्यका लागि उनी सल्या’नवाट जजारकोट आएका थिए । सल्यानमा परिवार छन्, वुवा आमा सबैलाई छोडेर उनी यहाँ आएका थिए । राम्रो शिक्षा दिएर भविष्य सपार्न भन्दै सबै’लाई गाउँमा छोडेर छोराहरुलाई लिएर आए’को बताएका छन् ।
गणेश कहिल्यै भेरीमा पौडि’ खेल्न जान्थेनन् । उनलाई पौडी खोल्न पनि आउँथेन । गाउँलेले घेरा हालेर लखेटेका कार’ण उनी नदिमा हा म फालेको हुनसक्ने भनेर गरिएको प्रश्नमा उनले त्यसो नभएर उनलाई भेरीमा फालेको बताएका छन् । त्यो दिन’को घटना सम्झदै बुवाले भने, त्यो दिन आमा काममा गइसकेको थियो । छोरा’लाई खाना खा भने । हुन्छ खान्छु भन्थ्यो । कतिवेला गयो थाहा नै भएन ।
आमाले बिलौना गर्दै भनिन्, हामीले निकै परिश्रम गरेर छोरा हुर्कायौं, पढायौं । अहिले साथीको’ लहै लहैमा लागेर ज्या’न गुमायो । हामी इन्डिमा पनि बसेका छौं त्यहाँ मानिस निधन हुँदा यस्तो अन्याय हुन्थेन । तर हाम्रै नेपा’लमा यस्तो अन्याय हुने रहेछ ।
छोरा गुमाएको पि डा छ, यस्तो बेलामा किरिया गर्न मिल्दैन भनेर पस्न दिएन । त्यो घरमा किरिया गर्दा देउता लाग्छन्, पाठा चढाउनुपर्छ भन्दै बस्न दिएनन्, बरु जति पाठा चढा’उनु परेपनि चढाउँथे । मेरो छोरासंग सबै साथै त्यही घरमा बसेर पढ्थे मेरो छोराको आत्मा त्यही घरमा आउँछ होला । त्यही घरमा किरि’या गर्न पाए हुन्थ्यो ।
तर पाइएन । उनले घटनामा द’लित मात्र नभएर अन्य जातका युवा’को पनि निध’न भएको भएपनि यसलाई जातिय नारा बनाएको भन्दै गुनासो गरेकी छन् ।
दलित युवाको लहै लहै’मा लागेर शाही र मगरले पनि ज्यान गुमाए । तर यिनीहरुका बारेमा कोही बोल्दैन उनले दुखी हुँदै भनिन् । जसको लागि गएको थि’यो उसकै लागि मात्र नाम छ, खै कि’न यस्तो गर्छन , दलित समुदायको मात्र नाम छ उनले बिलौना गर्दैै भनिन्, मेरो छोरालाइ न्याय कसले दिन्छ?
त्रिभुवन मावि खलंगा’बाट २०७४ मा एसईई उत्तीर्ण गरेका गणेश बुढा निम्न वर्गीय परिवारमा जन्मेका हुन् । कुशे गाउँपालिका–२, टालेगाउँमा जन्मिए पनि उनी डेढ दशकदेखि आमाबु’बासँग रानागाउँमा डेरा’मा बस्थे । बुबा पदमबहा’दुर र आमा राधिका सदरमुकाममा मजदुरी गर्छन् ।
१९ वर्षीय गणेशले वैदेशिक रोजगारीमा गएर परिवारको आर्थिक अवस्था माथि उकास्ने सपना देखेका थिए । ‘विदेश गएर पैसा कमाउँछु, तपाईंहरू’लाई सुख दिन्छु भन्थ्यो,’ राधि’काले भनिन्, ‘लकडाउनले विदेश जान ढिलो भएको थियो ।’ नवराज मिल्ने साथी भएका’ले गणेश त्यस दिन सोती गएको उनले बताइन् ।
Prevकोरोना परीक्षणका लागि संकलन गरेको स्वाब बाँदरले खोसेर खाइदियो (भिडियोसहित)
Nextजुम्ल्याहा नानीलाई बोक्दा शिशिरको आँखाभरी आँ’शु ! शिशिरलाई पर्यो अफ्ठेरो (भिडियो)
स्वेताले विवाह गर्ने उनका भावी पति को हुन् ? यसरी हुँदैछ विवाह (भिडियो सहित)
यी युवतीको भिडियो बन्यो भाइरल, कमेन्टमा युवाले भने १६/१७ वर्षमा यस्तै हुन्छ नानी (भिडियो सहित) (134700)